I-Mid Frequency Aluminium Ephungula Umlilo nge-200 ^ 1200kg amandla
Ikhaya / I-Induction Melting Furnace / I-Aluminium Ukuqubuka Isithandane / 200 ^ 1200kg Mid Frequency Aluminium Melting Furnace
I-200 ^ 1200kg I-Alvumini Ephakathi Kwama-Aluminium Enyakazayo
Categories: I-Aluminium Ukuqubuka Isithandane, I-Induction Melting Furnace, I-Metal Melting Furnace Tags: I-500kg I-Aluminium Ukuqothula Isibhamu, I-Aluminium Mid Frequency Melting, ama-aluminium aphakathi aphakathi, Umvuthwandaba ophakathi kwe-aluminium, I-aluminium yomsindo ovuthayo isithando somlilo, I-Frequency Furnace Mid, ukufakwa kwesithando somlilo phakathi, imvamisa ephakathi
200kg ^ 1200kg Mid Frequency U-aluminium oqhaqhaqhaqha umshini usetshenziselwa kakhulu ukuqubuka nokugcina inqubo yokufudumala kwensimbi ephansi enganamathele, njenge-aluminium, ithusi, i-zinc, i-lead, i-tin, i-cadmium namanye ama-alloys.
Uchungechunge lwama-series Ukwakhiwa kwe-aluminium e-Frequency yocingo elivuthayo i-aluminium lenzelwe ngokuqondile ngenhloso yokwehlisa insimbi encane, besebenzisa impela izinga lokushisa elungile nokuhambisa ngokushisa ukushisa. Lokhu kubalulekile ekuqotheni izinsimbi ezifana ne-aluminium uma ufuna ukulondoloza isikhathi esilindelekile sokuphila se-aluminium kanye nekhwalithi yayo. Isithando esilungele ukukhipha i-aluminium sizoletha ukulawula okushisa okuqondile ukuze kufezekiswe lo mgomo.
AIzinzuzo ze-electromagnetic Mid Frequency aluminium Melting furnace nge-induction:
Ukushisa kwe-electromagnetic induction ngentuthuko nokuvuthwa kobuchwepheshe, inqubo yokukhiqiza nobuchwepheshe bezakhi, isoftware, njengokuvikelwa okuthembekile kwamandla wamanje kungaba 2-200KW.
Ukuxuba umthamo we-SMJD uchungechunge I-Connection Mid Frequency aluminium isithando somlilo: